Saliida Cosori Best Fryers | Falanqaynta, Ra'yiga iyo Qiimaha
Saliida Cosori Free Fryers
Shirkadda qalabka Cosori waxa uu xoog ku soo galay aduunka shiilanayaasha hawada kulul. Mifreidorasinaceite ma aanu lumin karin fursada falanqeeyaan moodooyinkaaga ugu fiican, labada iibka ugu fiican.
Waxaa laga yaabaa inay ku xiisayso
Dib u eegistaan ​​waxaan ku arki doonaa sifooyinka wanaagsan ee labadaba, fikradaha isticmaalayaasha kuwaas oo isku dayay oo halkeen ka iibsan karnaa qiimaha ugu fiican.
➤ Waa maxay Cosori Saliid la'aanta ah ee ugu Fiican
Hadda shirkadu waxay suuq geysaa laba shiilan oo leh guul weyn oo asal ahaan ku kala duwan awood iyo karti, bal aan aragno tafaasiisha.
▷ 3,5 litir Cosori
Reviews Cosori iyo Qiimaha
【Saliid-karinta】Marka la barbar dhigo shiilan dhaqameed, Fryer-ka COSORI wuxuu kuu oggolaanayaa inaad hesho maro qallafsan oo isku mid ah qaaddo saliid ah ama xitaa saliid la'aan, taasoo ka dhigaysa cuntadaada mid caafimaad leh.
【3,5L & Square Basket】 3,5L awoodda ayaa ku habboon 1-3 qof; dambiisha labajibbaaran waxay balaadhisaa dusha sare ee xidhiidhka cuntada, samaynta si fiican u isticmaalka booska, si aad u kariso hilib aan caadi ahayn ama waxyaabo kale oo waaweyn.
【100 Recipes Multilingual】 Shiiliyahani waxa uu la socdaa buug ay ku qoran yihiin 100 cunto oo Isbaanish ah oo ay sameeyeen cunto kariyayaasha COSORI; Haddii aad u baahan tahay cuntooyin Ingiriisi, waxaad sidoo kale soo dejisan kartaa nooca pdf
【 fududahay in la isticmaalo】 11 barnaamijyada hore loo diyaariyey ayaa daboolaya noocyo kala duwan oo cunto ah, waxaad si fudud u bilaabi kartaa cunto karinta iyada oo loo marayo badhamada nadiifka ah iyo dareenka leh ee guddiga taabashada
Xusuusin rux】 Uma baahnid inaad la socoto habka cunto karinta mar kasta; Shaqada ruxdu waxay samayn doontaa dhawaaqyo ay ku xasuusinayso inaad rogto cuntada, oo waxaad ku heli kartaa dhadhan aad u siman oo qallafsan oo leh rux mar.
Awoodda: 3,5 litir.
Awooda: 1500 W
Xakamaynta dhijitaalka ah
Waqtiga iyo Shaashada heerkulka
11 Barnaamijyada la heli karo
Ku ilaali shaqada kulaylka kahor
BPA iyo PFOA bilaash ah
Makiinada weelka lagu dhaqo oo la go'i karo
Astaamaha aadka u fiican
Qalab leh nashqada khaanadaha jiidaya ee caadiga ah oo leh awood ilaa afar qof, waxay kuxirantahay sida aan nahay kuwa wax cuna 🙂
Iyadoo la tixgelinayo awoodda, awooddeeda 1500 watts waxay ku jirtaa habka caadiga ah ee qalabkan oo u oggolaanaya inuu gaaro heerkulka ugu fiican ee dhammaan noocyada suxuunta. Dhammaadka, waxa muhiimka ahi maaha wax aad u badan wadarta awoodda, ee waa saamiga awoodda / awoodda.
Shiilan qoto dheer Tani waa si buuxda u dhijitaal ah waxayna leedahay guddi taabasho horseed ah si uu u habeeyo, isagoo awood u leh inuu doorto mid ka mid ah Barnaamijyada 11 ama u habeeyaan heerkulka iyo wakhtiga si aan rabno.
Qalabka noocaan ah way ka nadiifsan yihiin Marka loo eego shiilanyada caadiga ah ama digsiyada maadaama aysan soo dayn ur badan. Intaa waxaa dheer, qaabkani waa mid laga saari karo iyo Makiinada-ammaan, fududaynta nadiifinta.
Guud ahaan waa fryer si fiican loo dhisay, oo leh qalab tayo leh (waa bilaash BPA iyo PFOA) iyo in marka loo eego dadka isticmaala natiijooyin cunto karinta oo wanaagsan.
Akhri faallooyinka isticmaalaha
▷ 5,5 litir Cosori
Cunto-karinta aan saliidda lahayn: COSORI Airfryer, waxaad ku raaxaysan kartaa cunto leh 85% dufan ka yar cuntooyinka shiilan ee caadiga ah; Waa doorashada ugu fiican in lagu hoggaamiyo nolol caafimaad leh iyo jir wanaagsan
fududahay in la isticmaalo: Waxaad dooran kartaa mid kasta oo ka mid ah 11 barnaamij oo leh hal badhan, oo si fudud u hel cunto macaan adiga oo aan la socon habka karinta mar kasta qalliinka kadib.
Karinta degdega ah: 360° Tiknoolajiyada Wareega Hawada Kulul waxay ka dhigaysa shiilan si dhakhso ah waqti gaaban gudaheed, iyo dambiilaha godan ayaa ku habboon hawadu inay wareegto, taasoo yaraynaysa wakhtiga sugitaanka cuntada.
Cuntooyinka lagu karsado ee Isbaanishka: shiilayadeenu waxa ay la socotaa buug cunto karinta (Jarmal / Faransiis / Talyaani / Isbaanish); Haddii aad u baahan tahay cunto Ingiriisi ah, waad nala soo xidhiidhi kartaa waxaanu ku siin doonaa qaab PDF ah oo aad ka arki karto qalabkaaga elegtarooniga ah
5,5L Mug weyn: 5,5L fryer qoto dheer ayaa dabooli kara baahida qoyska 3-6 qof markiiba; dambiisha labajibbaaran waxay ka dhigtaa inta ugu badan ee bannaan ee la heli karo; waxa aad u isticmaali kartaa in aad ka samayso digaag dhan 2.25kg oo cufan wakhtiga xafladaha
Awoodda: 5,5 litir.
Awooda: 1700 W
Kuwa u baahan awood dheeraad ah, calaamaddu waxay leedahay qaabkan 5,5-litir, oo ku habboon ilaa lix qaybood qiyaastii.
Si macquul ah, korodhka cabbirku wuxuu u baahan yahay awood badan si loo gaaro cunto karinta ugu fiican iyo qaabkani wuxuu kor u kacayaa 1700 watts.
Tilmaamaha intiisa kale ma kala duwana, ilaalinta sifooyinka qalabka ugu yar iyo qiimeynta wanaagsan ee isticmaalayaasha kuwaas oo isku dayay.
➤ Qiimaha Fryer-ka kulul ee Cosori
Qiimayaashu runtii aad ugama jabna noocyada kale, in kasta oo ay joogaan ka hooseeya noocyada ugu qaalisan, tefal iyo philips.
Mifreidorasinaceite waxaa jira aalado leh qiimo la mid ah ama xitaa ka hooseeya oo aan jecelnahay wax badan, sida kuwa amiirada ama xitaa farxadda shiilan ee tefal.
▷ Waxyaabaha lagu daro
Iibka qaabkan waxaad heli doontaa waxyaabaha soo socda:
dambiisha la saari karo iyo khaanadaha aan dhegta lahayn
Buuga Cunto karinta.
En xidhiidhkan waxa aad haysaa hab-raacyada astaanta lafteeda iyo buuggeeda pdf xidhiidhkan.
▷ Qalabka kale ee la heli karo
Intaa waxaa dheer, qalabkan ayaa diyaar ah kuwaas oo kordhiya isku-dhafka shiilan.
Digsiga keega: Sidaan horayba u ognahay, Fryer Cosori waxaan ku samayn karnaa dhammaan noocyada cuntooyinka, oo ay ku jiraan kuwa ugu macaan. Haddii aad ka fekereyso inaad samayso keega, waxaad u baahan tahay caaryaal iyaga. Keega yaa yidhi, keega ama keega kala duwan iyo waliba rooti. Tani waa sababta caaryada wareegsan ee dhererka sare leh ay had iyo jeer ku habboon tahay shaqadan oo kale. Waa aan dheg lahayn oo adkaysi u leh si aad u nadiifisid dhammaan rabitaankaaga. Waxa kale oo ay leedahay xajin si ay u dhigto ama uga saarto si fudud.
saxaarad Pizza: Sida magaceeda ka muuqata, waxay u noqon doontaa mid ku habboon pizza samaynta oo ah kuwa ugu kala duwan. Laakiin maadaama ay leedahay cabbir dhexdhexaad ah, waa run in aad ku samayn karto keega yar yar sida jiiska ama quiche. Mid kale oo ka mid ah aasaaska weyn ee noqda fikrad iska caabin ah iyo dabcan, sidoo kale aan dhejin oo aad had iyo jeer u baahan tahay. Had iyo jeer lagu sameeyo alaab caafimaad qabta oo bilaa BPA ah, iyo sidoo kale inay ku fiican tahay makiinada weelka dhaqda.
sariirta silikoon: Waa nooc ka mid ah dusha wareegsan oo leh halabuurka awllaha malabka. Waxaan u isticmaali doonaa saldhig loogu talagalay caaryadayada ama saxaradayada laakiin sidoo kale wax lagu kariyo dabool ahaan. Maadaama ay had iyo jeer diyaar u tahay inay na caawiso sababtoo ah waxay leedahay a dulqaad kulka sare. Intaa waxaa dheer in ay tahay mid aad u adkeysi leh inkastoo isticmaalka aan siino.
Caaryada Silikoon: Caaryada Silikoonku sidoo kale waa ku fiican yihiin inay awoodaan inay sameeyaan dhammaan noocyada keegyada gaarka ah, sida xaaladdu tahay. Sababtoo ah waxay leedahay godad dhowr ah si aad u horumarin karto dhammaan hal-abuurkaaga. Dhexdooda, keega macaan iyo macaan labadaba waxay noqon karaan furaha bilaabista ama soo afjarida cunto macaan. Iyaga oo aan ilaawin in ay sidoo kale ku fiican yihiin ukunta. The caaryada silikoon sWaa kuwo dabacsan, adkaysi u leh oo ku habboon maalin kasta.
Xirmada birta ah ee birta ah: Marka aan ka saarno saxan ama saxan cunto, had iyo jeer waa lagama maarmaan in la helo saldhig wanaagsan si loo dhigo miiska ama miiska dushiisa. Sidaa darteed, kiiskan, sidoo kale waa qalab kale oo aan u baahanahay. Taageero adag oo leh xariijimo ku fiican in la dhigo dheryaha ama saxaarada aan hore u soo sheegnay. Waxay ka ilaalin doontaa miiskaaga ama saldhiggaaga inuu helo kulayl, had iyo jeer la ilaaliyo.
Rack leh qayb gaar ah oo loogu talagalay skewersWaxaan jecelnahay fikradan kale, oo la mid ah tan aan soo sheegnay. Sababtoo ah waa shabakad, sida aan u naqaanno, laakiin marka uu weynaado wuu leeyahay nooc ka mid ah Sabuul dabacsanaan. Tani waxay ka dhigan tahay in iyaga ku jira waxaad ku diyaarin kartaa skewers hilibka caadiga ah ee aad jeceshahay. Maadaama ay tahay mid ka mid ah fikradaha aan ka maqnaan doonin barbecue kasta oo u qalma milixdeeda. Waxaad ku yeelan doontaa 4 skewers caafimaad qaba oo indho birbiqsi ah!
➤ Sidee u shaqeysaa?
Hawlgalkeedu wuxuu la mid yahay dhammaan kuwa isticmaala hawada kulul waana oo la mid ah wax lagu kariyo foornada.
Muuqaalkan waxaad ka arki kartaa wax badan oo ku saabsan moodelkan iyo on our home page waxaad haysaa sharaxaad faahfaahsan oo ku saabsan tignoolajiyada aan saliida lahayn, ee faa'iidada iyo khasaaraha.
Summada Cosori ma la isku halayn karaa?
Waa run in marka aanu doonayno in aanu iibsano qalab oo aanu gelin doono lacag aad u badan, waxaanu ka fikirnaa noocyada. Mararka qaarkood waxaan dooranaa kuwa caadiga ah, ama kuwa ugu caansan. Laakiin taasi macnaheedu maaha in inta kale ay sidoo kale u baahan yihiin fursad. Haddii shaki laga qabo calaamadda Cosori, waa inaan sheegnaa inay ka timaaddo Maraykanka iyo in marka lagu daro shiilan, ay sidoo kale leedahay foornooyinka iyo sidoo kale kafeega ama kiliyeyaasha si ay credit.
Laakiin waxa ugu muhiimsan waa taas waxa uu ku guulaystay Abaalmarinta Nakhshadeynta Reddot laba sano oo isku xigta qaabka shiilan. Maadaama ay leedahay dhamaystir labajibbaaran oo dheeraad ah tanina waa faa'iido weyn marka ay timaado isticmaalka si fiican u isticmaalka booska. Aad bey u qalantaa waana mid la isku halayn karo!
Maxaad u dooratay shiilan saliid la'aan ah oo Cosori ah
Waxaan had iyo jeer ka baqaynaa wakhtiga nadiifinta, laakiin maaha inay sidaas noqoto. Shiilan-la'aanta saliidda ee Cosori ayaa naga caawinaysa in aan habka fududeyno. Sidee? Waa hagaag Qaybaheeda la rari karo sida dambiisha, waxaanu geyn karnaa makiinada weelka lagu dhaqo. Laakiin waa run in aad gacanta ku dhaqi karto, wali way fiicnaan doontaa in aad sii daryeelto muddo dheer. Xusuusnow in ka hor inta aanad bilaabin habka nadiifinta, shiilantu waa inay noqotaa mid gebi ahaanba qabow. Cuntooyinka kale ee hadha, waxaad ku tirtiri kartaa maro qoyan saabuun yar oo khafiif ah ka dibna si fiican u qalaji. Sida ugu fudud!
Buuga cuntada lagu kariyo ayaa lagu daray
Marar badan waxaa naga go'a fikrado waxaanan u hurnay nafteena inaan si dhaqso ah uga raadino internetka. Xaaladdan oo kale, Shiilan-la'aanta saliidda ee Cosori ayaa horay u soo qaada iyaga, markaa waxay kuu badbaadin doontaa wakhti. Laakiin soo celinta waxay kuu ogolaaneysaa inaad ku raaxaysato cuntooyinka macaan iyo caafimaadka leh. Daahfurka dhadhan cusub iyo samaynta koorsooyinka koowaad iyo labaad iyo sidoo kale macmacaan si aad ula yaabto qoyskaaga oo dhan. Guud ahaan waxa aad gacanta ku haysaa in ka badan 100 cuntooyin oo qaab dhijitaal ah. Taasi miyaanay faa'iido weyn ahayn?
Barnaamijyada mar hore la habeeyey
Waa run in shiilanyada Cosori ay sidoo kale kaa yaabin doonaan markan. Sababtoo ah, in kasta oo dhammaan shiilanyadu ay leeyihiin barnaamijyo horay loo habeeyey, halkan waxaan ka heli doonaa wax badan, tan iyo markii aan ka hadlayno 11. Laakiin maaha oo kaliya inay ka soo baxaan laakiin sidoo kale waxay leeyihiin shaqada 'Shake' oo mas'uul ka ah kicinta cuntada adiga iyo adiga oo aan iloobin ah 'Preheat' kaas oo sida lagu tilmaamay, kululayn doona dambiisha ka hor intaadan karinin.
Cunto diirimaad ku hay
Shaki la'aan, ma ilaawi karno doorashadan kale ee Shiileeyaha Cosori sidoo kale leeyahay. Sababtoo ah mararka qaarkood waanu samaynaa cuntada, laakiin sabab kasta ha noqotee, waxay nagu qaadataa wakhti si aan u fadhiisano miiska. Tani waa tilmaame inaan u baahanahay shaqo ka ilaalisa cuntada kulul ilaa wakhtigaas ka yimaado oo aad haysato. Waxay ku saabsan tahay Shaqada 'Diirimaad hayso'. Markaa waxaad jadwal u samayn kartaa cuntadaada, doorashadan oo ha ka welwelin wax walba ilaa qof walba uu joogo miiska.
Daawaynta ka-hortagga faraha ee daboolkeeda
Inkasta oo ay run tahay in ay u muuqdaan in ay gudaha wasakhaysan, waxaan sidoo kale u baahanahay dibadda qumman. Gaar ahaan marka ay timaado naqshadaha sida gaarka ah kan kan oo kale ah. Sidaa darteed, ma jiraan wax la mid ah muujinta in ay leedahay a nidaamka faraha ka-hortagga ee dibadda. Tani waa xitaa haddii aad taabato ama dhaqaaqdo, raadku ma sii jirayo. Maxaa had iyo jeer ka dhigaya mid ka sii fiican, oo leh naqshad la mid ah kan ay leedahay, waxay runtii u baahan tahay caannimadeeda.
Waxa lagu qali karaa mobile
Maanta waxaa jira aalado badan oo aan ugu yeerno kuwa caqliga leh, sababtoo ah runtii waan xakameyn karnaa iyaga oo aan hortooda joogin. Hagaag, tani waxay sidoo kale ku dhacdaa shiilan Cosori. Marka la eego waxa lagu xidhi karaa wifi Oo sidaas oo kale, waxaad dooran kartaa barnaamijyada ama waxaad samayn kartaa isbeddel ku habboon adiga oo isticmaalaya qalabka codka sida Alexa ama telefoonka gacanta. Waxaad hore u ogeyd in apps-ka iyo talefannada casriga ah ee casriga ah aan horeba u haysanay koontarool ka badan intii aan malaynaynay dhowr sano ka hor.
Mabda 'ahaan, sifooyinka labada nooc ayaa ah heerka ugu fiican iyo qiimeynta guud Way fiican yihiin. Iyadoo ay taasi jirto, mid ka mid ah cilladaha nooca noocaan ah ayaa ah jawaabta haddii ay dhacdo burbur.
Halka ay run tahay in ay tahay in ay ku jawaabaan laba sano damaanad, Adeegga Farsamo La'aanta Dalkeenna waxay noqon kartaa dhibaato. Haddii kale waa doorasho wanaagsan oo qeexitaannada ayaa ka fiican marka la barbardhigo qalabyo kale oo badan oo fudud.
▷ Faa'iidada iyo khasaaraha
Dijital leh Shaashadda Led
Kala Duwan ee Habaynta
Meesha laga saari karo iyo makiinada weelka lagu dhaqo oo badbaado leh
Awoodda / Awoodda Saamiga
Cunto ma kiciyaan
Summada aan la aqoon
Beddelka Xiisaha leh ee Kale
Kuwani waa qaar ka mid ah moodooyinka ugu fiican ee leh nidaamka khaanadaha ee maanta la iibiyo oo noqon kara beddelka noocyo badan oo la aqoonsan yahay.
Fryer hawada XXL
Degdeg ah oo is haysta
➤ Iibso saliidda Cosori ee bilaashka ah
Hadda kuwani waa moodooyinka ugu iibinta wanaagsan ee summada Amazon Spain:
COSORI Fryer oo aan lahayn ...
Halkee laga iibsan karaa shiilan Cosori
Iibka internetka ee weyni had iyo jeer wuxuu leeyahay dhammaan noocyada qalabka, sidaas awgeed kiiskan ma ahayn in laga tago. Fryers-ka Cosori sidoo kale waa mid ka mid ah awooddeeda, dhab ahaantii, waxay isu dhigtay mid ka mid ah alaabooyinka ugu iibinta badan ee leh astaamo badan oo qiimo jaban ah. Waa run in ay leedahay noocyo kala duwan oo kala duwan, oo isku bedbeddela noocyo kala duwan iyo xitaa midabyo kala duwan si aad u doorato midka kuugu habboon. Ha iloobin in aad sidoo kale ku yeelan doonto alaabada kaydka ah ee Amazon ama qalabyada aad u baahan tahay.
Waxa kale oo aad ka heli doontaa qalab koronto oo yaryar iyo kuwa waaweyn labadaba El Corte Inglés. Markaa mid kan oo kale ah midna waa la waayay. Fryers waxay noqdeen lama huraan, sidaas darteed, waxaan yeelan karnaa qiimo kala duwan iyo noocyo kala duwan. Bakhaarku wuxuu kaloo diiradda saaraa Cosori sababtoo ah waxay leedahay tignoolajiyada ugu dambeysay iyo astaamo badan oo ay tahay inaan ku xisaabtano.
(Codadka: 2 Celcelis: 4.5)
⭐ Fryer Saliid la'aan ah » ⭐ Cosori
1 faallo ku saabsan "Cosori Fryers Without Oil"
06 / 01 / 2021 at 21: 09
Kaliya waxaan akhriyay laba isticmaale oo Cosori fryer ah, mid wuxuu sheegay in uu ka lumay biyo, midna in ay ku qaadato in ka badan nus saac in la shiilo xoogaa baradho ah ayaa ka soo saara dambiisha oo ay dhammayn.
Hagaag, mabda'a ahaan waxaan haystaa Cosori 5,5L. oo anigu ma arko wax khasaare ah, haddii aan haysto waxaan ku soo celin lahaa si caadi ah iyo isticmaala @ ee jajabyada baradhada waxaan u sheegi doonaa in ka hor inta aan la gelin dambiisha aan riixo / taabto furaha barnaamijka kuleylka ka hor. , Marka dambiisha baradhada ay buuxsanto Marka qaybaha 3/4 ee dambiisha la gooyo, waxaan dooranayaa barnaamijka oo leh calaamadda baqshadda baradhada, waxaan riixaa furaha / taabashada iyo ka dib 12 daqiiqo qiyaastii. dhawaaq dhawaq ah si loo rogo, baaldiga ayaa mar kale la gelinayaa si loo dhammeeyo barnaamijka waana taas. Sababtoo ah noocyada kala duwan ee baradhada waxaan tixgelinayaa in wejiga koowaad ee barnaamijka ka hor inta aan la rogin, ka dib marka la doorto barnaamijka si aysan u soo bixin si aad u rooti ah halkii 195 ° in barnaamijku yahay preset-ka waxaan hoos u dhigayaa 175 ° iyo Marxaladda 2 ° mar aan soo jeestay waxaan u kacaa barnaamijka horay loo diyaariyey, taas oo ah 195 ° waxayna ka soo baxeen kaamil, crunchier 6 ayaa si fiican loo sameeyay marka loo eego fryer qoto dheer oo saliid ah ama digsi shiilan. Saaxiibku waa arrin ku saabsan qalabka iyo tijaabinta. Maaddaama aan haysto fryer-kayga hiatal hernia si dhib leh uma dareemi karo. LOL